Eps Machines, Eps Moulds Uye Spare Zvikamu - Dongshen
Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co., Ltd ikambani inonyanya kubata nemichina yeEPS, EPS molds uye zvikamu zvekuchengetedza zvemashini EPS. Tinogona kupa ese marudzi ePS michina senge EPS Preexpanders, EPS Rakaumbwa richigadzirisa Machines, EPS Block richigadzirisa Machines, CNC Kucheka Machines etc.Kuva nehunyanzvi hwetekiniki timu, isu tinobatsira vatengi kugadzira yavo nyowani EPS mafekitori uye kugovera yakazara yekukona-kiyi EPS mapurojekiti ivo, zvakare isu tinobatsira makare mafekitori ePSS kuvandudza kugadzirwa kwavo nekudzora kushandiswa kwesimba uye kuwedzera kugona kwekugadzira. Kunze kwaizvozvo, isu tinopa sevhisi yekugadzira akakosha EPS michina sekuenderana nevatengi chikumbiro. Nesuwo tsika kuita EPS anoumba vamwe muchiso EPS michina kubva Germany, Korea, Japan, Jorodhani etc.
Nezve Machines Edu
Isu tinoshandisa World yekutanga kirasi brand OKUMA machining chishandiso kugadzirisa edu emuchina mahwendefa, saka edu emishini kunyatso kukwirira.
Isu tinoshandisa gobvu zvinhu kugadzira michina, saka edu michina anogara achiremerwa uye akasimba kupfuura vamwe vakwikwidzi ', uye michina inogona kushanda yakareba. Vazhinji vedu vatengi vachiri kushandisa anopfuura makore gumi neshanu 'michina.
Michina yedu inogara ichishanda nekukurumidza kupfuura mamwe magiredhi michina kubva kune vamwe vakwikwidzi. Vatengi vanogona kuwana kanokwana 10% yakakwira kuburitsa kubva kumachina edu.
Zvinhu zvakatumirwa kunze uye zvakazivikanwa zvakashongedzwa zvishongedzo zvinoita kuti michina yedu ishande zvakanaka uye yakagadzikana, zvakare inoderedza mutengo wekugadzirisa muchina.
DS1100-FDS1660 EPS Batch mhando pre expander
SPY90-SPY120 Inoenderera Pre expander
Itaiwo nyanzvi EPS pashoo
Mumakore apfuura, isu takatora chikamu mune nyanzvi EPS muchina kuratidzira muJorodhani, Vietnam, India, Mexico uye Turkey etc. Nyika. Tichitora mukana wechiratidziro, takasangana nevatengi vazhinji vakatotenga michina yeEPS kubva kwatiri kunyangwe vasina kumbosangana, zvakare takasangana nevamwe shamwari nyowani vane hurongwa hwekuvaka matsva ePSS. Kuburikidza nekutarisana takatarisana, tinogona kunzwisisa zvirinani zvavanoda, kuti tigadzire mhinduro kwayo. Pakati pevashanyi vakasiyana mafekitori evashanyi, chakanyanya kundifadza yaive fekitori imwe yeEPS ...
nezve ICF (yakasungirirwa kongiri template)
ICF. Zvinoitwa EPS chimiro Kuumbwa muchina uye ICF muforoma. Rudzi urwu rweEPS module inoshanda zvakanyanya mukupisa kupisa uye kuputira inzwi. Kwakaedzwa kuti kuchengetedzwa kwesimba kwezvivakwa zvakagadzirwa neICF mabhuroko kunogona kusvika kusvika 65%. EPS ICF inovhara haingopa chete inoshanda nzira yekuvaka yekunze kuputira kwemadziro munzvimbo dzinotonhora, asi zvakare inogadzirisa matambudziko ekuvaka akadai sekumeso ekunze ekunamatira pamadziro, uye yakareba nguva yekuvaka. Iyo ICF module Cons ...
Yangoerekana inova Coronavirus yakavhiringidza kutengeserana kwepasirese.
Yangoerekana inova Coronavirus yakavhiringidza kutengeserana kwepasirese. Vatengi vazhinji vanonetsekana kuti havana mainjiniya ekumisikidza kana kugadzirisa michina yavakange vatenga kubva kuChina Hongu, ichokwadi kuti vazhinji vatengesi vane dambudziko iri, asi kwete mukambani medu, nekuti mukuwedzera kune maChina mainjiniya, isu zvakare tine vane ruzivo rweinjiniya veIndia, uye mainjiniya eJordanian. Ingo muna Mbudzi, mainjiniya edu eIndia akaenda kuYemen kunogadza EPS Shape Molding Machine yekugadzira mutsara. Mutengi akatenga iyo yese EPS SHAPE KUUMBISA MACHINE MUZVINZO, kusanganisira EPS BATCH PREEXPANDER, SILOS, EPS SHAPE KUUMBWA MACHIN ...